Archive du 20190119
Marc Ravalomanana Ho lasa mpanelanelana iraisam-pirenena ?
Raha ny vaovao farany re miampy ny fanadihadian’ireo mpikirakira politika efa ho herinandro izao dia hanatrika ny fianianan’ny filoha vaovao Andry Rajoelina eny Mahamasina anio Atoa Marc Ravalomanana izay mpifaninana taminy nandritra ny fihodinana faharoa.
Famindram-pahefana teny Iavoloha Nangatsiaka ny fandraisana
Fotoana lehibe eto amin`ny firenena ny fotoana nanaovan`ny filoham-pirenena teo aloha, Hery Rajaonarimampianina sy ny filoham-pirenena vaovao, Andry Nirina Rajoelina, ny fifamindram-pahefana notronin`ny filoham-panjakana, Rivo Rakotovao.
Fanolorana lakile teny Iavoloha Fa inona marina no nitranga ?
Niandrandra ny fanolorana ny lakilen`ny repoblikan`i Madagasikara ny rehetra taorian`ny fifanaovan-tsonia an`ireo antontan-taratasy misahana ny raharaham-panjakana eto Madagasikara.
Hery Rajaonarimampianina Nirary ny soa sy ny tsara ho an`ny firenena
Taorian`ny fifandimbiasam-pahefana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha omaly dia nitafa fohy tamin`ny mpanao gazety ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina.
Nicolas Sarkozy Efa nahazo avara-patana teny an-dapa sahady
Nigadona omaly teto Madagasikara ny filoha Frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy, izay nitondra an’i Frantsa (2007-2012) tamin’ireny fotoanan’ny fanonganam-panjakana teto Madagasikara ny taona 2009 ireny.
Rivo Rakotovao Miverina ho filohan’ny Antenimierandoholona
Nanatanteraka ny adidiny teto amin`ny firenena ny filoham-panjakana mpisolo toerana, Rivo Rakotovao, taorian`ny fifandimbiasam-pahefana teo amin`ny filoham-pirenena roa tonta.
CENI Madagascar “Tokony hiroso amin`ny lisitra biometrika isika”
Niroso tamin`ny sehatra nifampidinihana voalohany amin'ity taona 2019 ity, ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) sy ireo mpisehatra amin'ny fifidianana toy ny fiarahamonim-pirenena, antoko politika, orinasan-gazety.
ILAY VAHINY MAMPIHOMEHY
I Sarika ve no vahinin`ise Amin`ity velirano goavana be ? Sa hoe maro dia maro ireo olo-nantsoina Fa izy no namana tsy hay hadinoina ?
Taom-pilalaovana Badminton Malagasy 2018 Hofaranana amin’ny fiadiana ny ho tompondaka olon-droa miaraka
Nambaran’Atoa Ravalison Jean Aimé filohan’ny Federasion’ny Badminton eto Madagasikara tamin’ny firesahany tamina mpanao
Fanatanjahantena nentim-paharazana Voazanaka, hoy ny GAKAMA
Hifampijery isika manomboka izao, hoy ny filohan’ny fikambanana GAsy KA MAhery (GAKAMA), Maitre Michel le Dragon, satria sambany tao anatin’ny 120 taona no hanomboka ho sahy hiteny amin’ny maha gasy azy ny gasy.
Fanalahidy hahavita inona ?
Feno ny fahefana eo am-pelatanan’ilay filoha vaovao. Efa any aminy, hono, ny lakile hamahana ny olan’i Madagasikara na dia niteraka resa-be aza ilay fombafomba fifanolorana tsy tanteraka omaly teny Iavoloha.
Firaisakinan’ny terak’Ibara Mitaky fampandrosoana amin’ny filoha vaovao
Tahaka ny fikambanan’ny faritra rehetra dia nanatanteraka fifampiarahabana nahatrarana ny taona 2019 ihany koa ny Firaisakinan’ny terak’ibara tetsy Ampefioha ny alakamisy 17 janoary lasa teo.
Ambodinisotry sy ny manodidina Tafakatra 3.000 Ar ny rano iray bidon omaly
Tafakatra 3.000 Ar ny rano iray bidon miloko mavo nanomboka ny alakamisy lasa teo teny Ambodinisotry sy ny manodidina tonga hatrany amin’ny 67Ha avaratra atsinanana.
Mpanakanto Remanindry Marary mafy ao amin’ny hopitaliben’i Toliara
Mihombo hatrany ny aretina mahazo an’i Remanindry, mpanakanto Malagasy iray havanana amin’ny fitendrena lokanga sy marovany avy any amin’iny faritra atsimon’ny Nosy iny.
Lehilahy voadonan’ny fiara Hita faty vao maraina tao Vatofotsy Antsirabe
Nahitana fatin-dehilahy iray tokony ho 45 taona indray tao Mahafaly-Vatofotsy ny marainan’ny omaly zoma 18 janoary teo.